पत्रकारको उपन्यास- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — पत्रकार तथा मानव अधिकारकर्मीको पहिचान बनाएका पुरुषोत्तम दाहाल उपन्यास ‘शान्ता’ लिएर पाठकसामु आएका छन् ।
दाहाल पत्नी शान्ताको सत्यकथालाई आख्यान रूप दिएर यो उपन्यास लेखिएको छ । अधिकांश पात्र नेपाली समाजभित्र यत्रतत्र पाइने खालका छन्, पाठकलाई यो कृति पढिरहँदा उपन्यासभन्दा पनि जीवनी र आत्मजीवनीझैं लाग्न सक्छ ।
समीक्षक कुमारप्रसाद कोइरालाका अनुसार, तृतिय पुरुष दृष्टिविन्दुबाट लेखिएको ‘शान्ता’ विषयवस्तु र कथानकअनुसार उपन्यासभन्दा पनि ‘अर्ध–उपन्यास’ जस्तो छ । लेखकको अनुभव, स्वभाव, संघर्ष र वरपरको सामाजिक परिवेशलाई औपन्यासिक रूप दिइएको छ ।
‘कसैलाई नांगेझार पार्न, कसैको मनमा निरर्थक आहत पुर्‍याउन नभएर एक साहसिक महिलाको विवेक, शौर्य र मानवतापूर्ण कार्यलाई अभिलेखबद्ध गर्दै जीवन्त तुल्याउन’ आफूले शान्ता लेखेको उपन्यासकारले उल्लेख गरेका छन् । आफन्तलाई बचाउने रहरमा प्रतिबद्ध यौटी नारीको सचेतना, भावना र संकल्प ‘शान्ता’ मा देखिएको छ । वास्तविकतासँग जुध्दै गरेको एउटा पात्रको अन्तर्मनको पीडा पनि ‘शान्ता’ मा उत्रिएको छ । व्यक्ति र व्यक्तिका सम्बन्धहरू, समाज र समाजका आचरणहरू, स्वार्थ, संकल्प र उद्वेगको समवेत स्वर उपन्यासमा आएको छ । उपन्यास सगरमाथा वाङ्मय प्रतिष्ठानले निकालेको हो ।
अनुषा (शान्ताकी छोरी) ले डाक्टर प्रसादलाई नयाँ जीवन प्राप्तिको वार्षिकी उपलक्ष्यमा दिएको बधाईबाट सुरु भएको ‘शान्ता’ १७ अध्यायमा लेखिएको छ । उपन्यासमा मूलत: वर्णनात्मक शैलीको प्रयोग भएको छ । साठीको उत्तराद्र्धतिर लागेका कलेजोबाट पीडित मामा डाक्टर प्रसादलाई कलेजो दान गर्ने शान्ताको घोषणा र यसले उत्तमदा (शान्ताका पति) तथा अन्य स्वजनमा ल्याएको तरंगबाट सुरु भएको उपन्यासमा चरित्रका विभिन्न पक्ष प्रकट भएका छन् । आफैं विभिन्न स्वास्थ्य समस्याले ग्रस्त शान्ताको कलेजो दानबारेको घोषणा कति व्यावहारिक, कति प्रशंसनीय छ भन्ने द्विविधाको चिरफार यहाँ छ ।
डाक्टरप्रसाद एक सरल र कर्तव्यनिष्ठ डाक्टर भए पनि उनको हुर्काइमा परेको वर्गमोह र आडम्बरले शान्ता/उत्तमदाजस्ता कर्मशील पात्रहरू उनको प्राथमिकतामा पर्दैनन् । डाक्टर नजिकका नातेदारको वैभवशाली जीवन र त्यो जीवनशैलीभित्रको कृत्रिम हार्दिकतालाई उदांग पार्दै शान्ताको करुणा, मानवता र दृढतालाई स्पष्ट पार्दै कथा अगाडि बढेको छ । उपन्यासले मेदान्त अस्पतालमा भएको उपचार प्रक्रिया, त्यसमा निहित प्रक्रियागत जटिलता, नेपाली दूतावासको निरीह अवस्था, सरकारी कर्मचारीको सेवाग्राहीप्रतिको उपेक्षाभाव, विदेशमा रहेका नेपाली मित्रजनले गरेको आत्मीय सहयोग आदि चित्रण भएको छ । ‘छन् गेडी सबै मेरी’ उखानलाई चरितार्थ पार्ने चरित्रका प्रतिनिधि रूपमा उत्तमदाका भाइ र डाक्टर प्रसादका नजिकका नातेदार पर्छन् ।
मूलकथा सत्यतामा आधारित भएकाले होला, शान्तामा औपन्यासिक घटना र आकस्मिक मोड तथा नाटकीयताले प्राथमिकता पाएको छैन । विषयमा एकोहोरो वर्णन मात्रै छैन, अत्यन्त सरल र बोधगम्य भाषामा बुझाउने काम गरिएको छ ।
हालै ‘शान्ता’ अंग्रेजी संस्करणमा पनि आएको छ, नारायणप्रसाद घिमिरेको अनुवादमा । ‘शान्ता’ बिक्रीबाट जम्मा भएको रकम क्यान्सरपीडितको सहयोगका लागि ‘शान्ता फाउन्डेसन’ मा जम्मा गरिने प्रतिबद्धता लेखकको छ ।
प्रकाशित : माघ १२, २०७५ १०:२९
काठमाडौँ — तपाईं हामीमध्ये अधिकांशले सम्झिन्छौं होला— आमा–हजुरआमाको हातले बनेको कागती र मह, अदुवा हालेको पानी ।
(आजकल तारे होटलमा ‘हनी हट लेमन’ भनिन्छ) । रुघाखोकी लाग्दा खाइने घरेलु दवाइ । पखाला लाग्दा आमाले मेथी–लसुन हालेर बनाएको पातलो जाउलो पनि सम्झनामा आउँछ ।
अहिले पनि जाडो याममा गरम मसला हालेर तातो चियो खाँदा शरीरमा स्फूर्ति अनुुभव हुुन्छ । रुघाखोकीले ग्रस्त भएको शिथिल जिउमा केही आराम मिल्छ । अक्षयतृतीयामा सातु र सर्वत खाँदा थाहा हुन्छ, ‘अब गर्मी लाग्न थाल्यो ।’ हाम्रा वरपरका यस्ता अनेक चलन यसै अस्तित्वमा आएका होइनन् । यिनका पछाडि ठूूलो विज्ञान छ । घर वरपरका वनस्पतिको उपयोगिताबारेमा आमा–हजुरआमा हुँदै कुप्री आमाहरूबाट जनश्रुतिझैं फाइदा/बेफाइदा सुनिंदै आएको हुनुपर्छ ।
अफसोस, आजको अति आधुनिकताले गर्दा यी सबै ‘परम्परागत ज्ञान’ बेकम्मा र पुुरातनवादी भइरहेका छन् । चिकित्सक भएर काम गरेपछि पहिले म आफैं पनि पहिले–पहिले हजुरआमाले मेरो घाउ भएको खुुट्टामा बेसार–तेल दलेको सम्भँmदा ‘कस्तो मूर्खतापूर्ण काम गर्नुभएको’ भनेर कड्किन्थें ।
तर, २० वर्षअघि भारतमा डा. बन्दना शिवा र डा. मीरा शिवाजस्ता वैज्ञानिक विदुुषीबाट वनस्पतिको औषधीय प्रयोगबारेमा भाषण सुुनेपछि म बदलिएँ । उनीहरूले लेखेको किताब पनि पढें । बिस्तारै विश्व स्वास्थ्य संघले परम्परागत ज्ञानको बारेमा लेख्न र बोल्न थाल्यो, अनि आफ्ना वरपर भएका वनस्पतिको महत्त्व र प्रभावबारे थाहा हुन थाल्यो ।
केही महिनाअघि ‘नेसनल ज्योग्राफी’ ले निकालेको ‘मेडिसिनल हर्ब’ नामक किताब मैले अमेरिका जाँदा उपहार पाएँ । संसारका विभिन्न देशमा भएका वनस्पतिको चिकित्सकीय महत्त्वबारे लेखिएको यो किताब पढेपछि मलाई लाग्यो— हाम्रा पूुर्खाहरूले वनस्पतिको विज्ञानको उपयोग नजानेरै पनि राम्रैसँग गरेका रहेछन् ।
यी यो किताब पढ्दा मलाई ज्ञान भयो कि विभिन्न फूूलहरू जसलाई हामी केवल सौन्दर्यको दृष्टिले हेर्छौ, सजाउँछौं, उपहार दिन्छौं । ती फूल त खाँदा पनि हुने रहेछ । जताततै आफै फल्ने, हामीले बेवास्ता गरेका कतिपय वनस्पतिबाट औषधि ‘क्याप्सुुल’ बनाइने रहेछ ।
किताबमा विभिन्न तरिकाले कुन वनस्पतिको कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी दिइएको छ । किताब पढेपछि मैले थाहा पाएँ, आफूुले दैनिक जीवनमा प्रयोग गरिरहेका कतिपय वनस्पतिको वैज्ञानिक अनुसन्धान भएको रहेछ अर्थात् परम्परागत ज्ञानको पनि वैज्ञानिक आधार रहेछ । ‘नेसनल ज्योग्राफी’ जस्तो संस्थाले प्रकाशित गरेको यो किताबमा हाम्रा वरिपरि भएका वनस्पतिबारेमा रमाइलो तरिकाले लेखिएको छ ।
विदेशमा चाहिं प्राय: सबै वनस्पतिलाई ‘क्याप्सुल’ बनाएर पनि बेचिन्छ । उदाहरणका लागि अदुवा हाम्रो भान्छामा कहिले टु्ट्दैन । हामी जाडोमा अदुवा–चियाको आनन्द त मजासँग लिन्छौं । अदुवाको टुक्रा स्वाद लिएर खान सकिन्छ । अदुवाले वाकवाकी रोक्ने काम पनि गर्छ । गर्भवती महिलालाई त म जहिले पनि एक टुक्रा अदुवा मुखमा हालिराख्न सल्लाह दिन्छु । लामो यात्रामा जाँदा म आफैं केही टुक्रा अदुवा साथैमा राख्छु । अध्ययनले देखाएको छ कि क्यान्सर बिरामीलाई विकिरणद्वारा उपचार गरेपछिको खानपिन गर्न मन नलाग्ने अवस्थामा अदुवा अचुक औषधि हुन सक्छ । अदुवाको महत्त्व कति छ भन्ने कुरा मैले इरानमा छँदा थाहा पाएकी थिएँ । भारतबाट लगिने अदुवा त्यहाँ एक किलोको २५ डलर पर्दो रहेछ, यो सन् २००४ को कुरा थियो ।
हामीले भटमासलाई खाद्यको रूपमा प्रयोग गरे पनि चिनियाँ औषधि विज्ञानमा यसलाई ज्वरो निको पार्न, तनाव हटाउन पनि प्रयोग गरिन्छ । यो मुटु र मृगौलाका लागि पनि उत्तम हुन्छ । भटमास शरीरको मोटोपन घटाउन, पिसाब फेर्दा गाह्रो भएको वा पोल्ने स्थिति कम गर्न प्रयोग गरिने कुरा लेखिएको छ ।
बारी/कान्लामा जताततै हुने एलोभेराले अहिले निकै चर्चा पाइरहेको छ । विशेषगरी छालाको सौन्दर्य बढाउन भनेर यो प्रयोग गरिन्छ । म आफैँचाहिँ छाला फुटेको बेला, सानोतिनो पोलेको बेला एलोभेरा प्रयोग गर्छु । एलोभेराको रस पनि विभिन्न तरिकाले प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर लेखिएको छ । अमेरिकाको दक्षिण टेक्सास र मेक्सिकोमा यो सौन्दर्य साधनका लागि धेरै प्रयोग गरिन्छ । साथै खानका लागि क्याप्सुल बनाएर बेचिन्छ पनि ।
यसैगरी यस किताबमा अनार, बेसार, लसुन आदिको महत्त्वबारेमा भनिएको छ । यस्ता वस्तुहरू आयुुर्वेद, चिनियाँ चिकित्सा विज्ञानमा कसरी प्रयोग भइरहेछ भन्ने पनि राम्रो जानकारी दिइएको छ ।
प्रकाशित : माघ १२, २०७५ १०:२७